Saaxiib wanaagsan iyo lataliye, Ron Brumbarger ayaa saaka ii dhigay qoraal aniga oo wata iskuxiraalaha dhibka leh ee blog-ka Blogger oo ka soo muuqday qaar ka mid ah Alerts-ka Google ereyada muhiimka ah ee uu raacayay qaarkood. Halkan kuma celin doono ereyada muhiimka ah, maadaama aanan rabin martidayda inay dib ulaabtaan ama booqdaan baloogga, laakiin natiijooyinka waxay ahaayeen kuwo aad u dhib badan. Waa tan qayb ka mid ah qoraalka ka soo baloog oo aan ka helay ku xidhan:
URL-ka iyo magaca balooggu wuxuu umuuqdaa mid si qayaxan loo qoro si abuure uu ula socdo natiijooyinka. Waxaa ku jira qoraalada waa qeyb saddexaad oo lagu rusheeyey keywords keywords - waxay umuuqataa inay tijaabineyso cufnaanta ereyga. Sidoo kale, waxaa jira backlinks bogag kale oo tijaabinaya keywords kale… raadku wuu socdaa wuuna socda.
Baloogga su'aasha laga qabo uma muuqdo inuu xadayo wax kasta oo ka mid ah, kaliya wuxuu ku dhexjiraa tijaabinta qaar ka mid ah ereyada raadinta muhiimka ah iyo weedhaha Hal sabab oo tani baqdin geliso ayaa ah inay u badan tahay inay tijaabinayaan si ay u xisaabiyaan sida loogu guuleysto ereyadaas makiinadaha raadinta. Waxaan ogeysiiyey Ron oo waxaan u diray xiriiriye Foomka warbixinta Blogger ee Spam Blog; waxaan rajeynayaa, isla markiiba waa la xiri doonaa iyo sidoo kale dhammaan baloogyada kale ee la xiriira ee ku xiraya kana imanaya iyaga.
La yaab iguma aha inay jiraan dad spameriyayaal ah oo dibadda jooga oo tijaabinaya qaababkan. Waan layaabay, in kastoo, tani ay ka dhacayso sanka hoostiisa ee Google! Matt Cutts wuxuu weydiisanayaa fikradaha qaar waxa ku saabsan Google waa inuu wax ka qabtaa webspam sanadkii 2009 - waxaa laga yaabaa in barnaamijkooda u gaarka ahi noqdo mudnaanta koowaad!
Waad ku mahadsantahay inaad i ogeysiiso oo aan wax ka qoro Ron! Ron waa madaxweynaha shirkadda Bitwise Solutions, oo ah shirkad horudhac ah oo halkan ku taal Indianapolis oo shaqooyin yaab leh ka qabata qaran ahaan Horumarinta iyo is-dhexgalka Microsoft Sharepoint.
Tags: Koofiyad madowkoofiyad madow seomadowblackhat seoBloggergoogle +cutubyada mattaankaMicrosoft Sharepointron brumbarger
Tusaha Webka Gal
Haddii aad siiso xog-ururin Google awoodda hadalka oo aad tidhaahdo "ii sheeg Duulimaadyada taga Chicago" taasi waxay u dhowdahay waxay odhan lahayd. Iyadoo aan cidina eegin garabkeeda keydka xogta ayaa asal ahaan aan caddayn lahayn.
Waxay heli laheyd miisaanka ereyga saxda ah. Waxay heli laheyd tirada ficillada / magacyada / joojinta erayada sida saxda ah. Waxay heli laheyd dhowr arrimood oo kale oo xasaasi ah oo sax ah laakiin waligood wax micno ah ma sameyn doonaan ilaa ay ku celcelinayaan hadal ahaan.
La yaab iguma aha inaan arko tan sidoo kale, waxay u egtahay in 2010 laga yaabo inay tahay sanadka xeeladaha xoog-sheegashada ah ee ay la wareegaan halka ay spammers kaliya weerarayaan natiijooyinka raadinta ee mugga xad-dhaafka ah halka Google uu noqdo mid qallafsan oo u baahan isku-darka ereyada kaamil ah ka hor inta uusan u dhiibin bogga hal natiijooyin .
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo wax badan oo ka mid ah natiijooyinkaaga Doug haddii wax kale ay ku soo kordhayaan tan.
George dw Beeraleyda
Aug 5, 2009 at 4: 45 AM
Labadii faallood ee ugu dambeeyay miyaanay u ekayn spam?
Blah waan jeclahay balooggaaga, waan soo noqon doonaa oo waan hubin doonaa iwm….,
hadda waxay leeyihiin PR3 Backlink hmmmm…
Hagaag link ma dhajin doono lol naftayda 🙂
Agoosto 5, 2009 saacaddu markay ahayd 12:46 PM
Anigu culays badan ma saarin Pagerank - Waxaan aad ugu fiirsadaa si fiican u darajo siinta ereyada muhiimka ah ee soo jiita taraafikada badan. Balooggan ayaa si fiican ugu jira boqolaal eray oo muhiim ah Miyaan jeclaan lahaa inaan helo PR9? Hubaal! Ma helayo inaan go'aansado taas, in kastoo. Waxaan hayaa TONS gadaal-gadaal ah iyo taariikh weyn - ma hubo sababta uu PR-ga u hooseeyo.
Mahadsanid RE: SPAM-ka. Waxaan ku jiraa IntenseDebate hadda waxaanan isku dayayaa inaan ogaado sida loo helo faallooyinkan duugga ah si loogu calaamadiyo inay yihiin spam!
Agoosto 5, 2009 saacaddu markay ahayd 12:47 PM
Mahadsanid RE: SPAM-ka. Hadda waxaan ku jiraa IntenseDebate - ma hubo sida ay uga gudbeen. Way baxeen hadda!